China cationic machira akakwana zipi bhachi yevakadzi vane hoodie fekitori uye vagadziri | Dufiest
cationic machira akakwana zipi bhachi revakadzi vane hoodie
100% polyester cationic machira
Yakarukwa cationic slim hoodie isarudzo inopisa pakati pevanhu pasi rese uye inotengeswa nesu pamutengo wevatengesi Isu tiri voga mugadziri uye mutengesi wemitambo kubva kuChina. Isu tinoshandisa jira rakasiyana senge donje, polyester uye inoenderera uye Iyi vakadzi hoodie slimfit inowanikwa pamutengo wevatengesi. Vatengi vanogona kutenga hoodie yegorosa muhuwandu hwakawanda AT yemakwikwi mutengo AS AS DUFIEST mitambo inogadzira yakasarudzika kubva kuChina, wholesaler, ekisipota uye fekitori yemitambo, hoodies, track majaketi uye pasi, T-shati, Tangi yepamusoro uye akakwana mapfupi kupfeka. Inogona kushandiswa kune ese epamba uye kushanda muAvhu uye munguva yechando, inova yakapfava uye fashoni.
Iyo Dufest yakapfava uye inodziya yevarume zipi cationic hoodie ichadziisa yako yakasarudzika, yakasarudzika maitiro. Uine hunyanzvi kana dhizaini yakasarudzika pane ino yakatetepa yakakodzera uye yakasimba donje redonje, ino ichave yako nyowani nyowani zip up hoodie.
· Huremu hunorema uye hunogara kwenguva refu hwakagadzirwa ne40% donje / 60% polyester
· Inosanganisira homwe dzepamberi, dzakatambanudzwa cuff cuffs uye chiuno, uye tambo yekukweva
· Jam isingamiriri simbi zipi inosanganisirwa
· Mazimbe Heather ane tambo nhema.
· Side-seamed yevakadzi kukwana
· Inomhanya zvishoma
· Saizi kumusoro kana iwe uchida chimwe chinhu roomier
· Inoratidzira yakapinza uye yakajeka dhizaini dhizaini
· Muchina wekuwachisa unotonhorera wakaita semavara, kuwira pasi pasi. Inogona kupera mushure mekugeza
· Kunze kwenyika
Yepfuura: Yakakwira-kora inodzora sweatshirt yevakadzi
Zvadaro: hoodie sweatshirt Kudhinda kudhinda kwemukadzi